Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Allan Loureiro Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Allan Loureiro na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, nwunye ya, umuaka ya, ndu ya, uru ya na ndu onwe onye.
Na nkenke, nke a bụ akụkọ banyere Brazil, site na nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịnala gị sie ike, nke a bụ oge ọ bụ nwata rue ụlọ okenye - nchịkọta zuru oke nke Allan's Bio.
Akụkọ ndụ nke Allan Loureiro. Lee ndụ ya na Bilie foto.
Ee, ndị egwuregwu bọọlụ nwere ekele maka ya Allan enyela Everton na n'okpuru Carlo Ancelotti. N'agbanyeghị otuto ahụ, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara akụkọ ndụ Brazil. Enweghị oge ọzọ, hapụ ka ịmalite.
Allan Loureiro Nwatakiri Akụkọ nke:
Malite, aha ya zuru oke Allan Marques Loureiro. A mụrụ Allan 8th nke Jenụwarị 1991 na ndị mụrụ ya, Mr na Mrs Loureiro na obodo egwuregwu ama ama ama Rio de Janeiro, Brazil.
Legharịa anya na obodo mara mma nke ọmụmụ ya, Rio de Janeiro.
N'oge mbụ nke ndụ ya, Allan nwere mmasị na football mgbe ọ hụrụ oke nraranye nke ndị obodo ibe ya na egwuregwu ahụ. Mmasị o nwere n'ịgba bọl enyeghị ya nkwado zuru oke igwu egwu.
Ọtụtụ oge, nne ya rụrụ ọrụ nke 'nne na-eche nche karịa' ma gbochie ya ịga n'okporo ámá iji gbaa bọl.
Ya mere, Allan nke malitere inwe mmasị na bọl enweghị ike ịgba bọọlụ dịka ọ chọrọ.
Ezigbo ezinụlọ Allan Loureiro:
Ọ bụ ezie na mama ya gbalịrị igbochi ya ịgba bọl n'oge ọ bụ nwata, n'oge na-adịghị anya ọ hapụrụ ya ka ya na ndị ọgbọ ya na-egwuri egwu ka ọ na-etolite.
Iji gwa gị eziokwu, ọ dịghị onye nwere ike imebi ịhụnanya bọọlụ na-agba n'ime ọtụtụ ezinụlọ n'okporo ámá Brazil.
N'ihi ya, anyị nwere ike ịchọpụta na ọfụma football nke Allan nwere na mmekọrịta ezinụlọ ya.
O nwere ike ịbụ na ịmara na agbụrụ mmadụ ma ọ bụ ezinụlọ sitere na aha ya.
N'iburu nke a, aha nne na nna nke Allan Marques na Loureiro n'otu n'otu sitere na ihe nketa Brazil.
N'ihi ya, ezinụlọ ya sitere na Rio de Janeiro, Brazil.
O si n'obodo a ma ama dị na Rio de Janeiro, Brazil.
Afọ ole na ole gara aga, e nwere arụmụka banyere mba Allan si. Dabere na BleacherReport, enwere otu mkparịta ụka banyere ndị ịgba ọsọ bọọlụ hapụrụ Brazil gaa Italytali. O nwere ike ịbụ na ọ sitere na mgbọrọgwụ ezinụlọ sitere na mba Europe?
Kedu ka Allan Loureiro si malite njem njem bọọlụ ya:
Dika nwatakiri, Allan gosiputara nchegbu karia ihe obula. O siri ike ịnọ otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ na-enweghị ịgba bọl.
N'oge ahụ, nrọ ya nke ịbụ onye ọkpụkpọ egwu a na-asọpụrụ na-ewusi ike. Onweghi ihe nwere ike ịgbanwe uche Allan ka ọ ghara ịbanye na bọọlụ.
N'ihi ya, ndị mụrụ ya enweghị nhọrọ karịa inyere ya aka ịbanye Madureira Esporte Clube (otu ìgwè ndị Brazil na-agba bọl na obodo Rio de Janeiro).
N’igide mkpebi ya nke ịbụ onye ọkpụkpọ egwu a na-asọpụrụ, Allan lebara anya n’ihe ọ bụla a kụziiri ya na Madureira.
Allan Biography - Ndụ Ndụ Mmalite:
Mgbe afọ ole na ole nke ọzụzụ nkuzi siri ike, Allan bịara bụrụ onye ọkpụkpọ egwu pụrụ iche. N'ezie, nkà ya na ịdị nkọ ya n'ọtụtụ egwuregwu dị na Madureira dọtara ọtụtụ klọb ọkachamara.
Ka ọ na-erule oge Allan Loureiro mere afọ 17, otu ụlọ ọgbakọ ndị Uruguay - Deportivo Maldonado - bịanyere aka na ya maka ego nkwekọrịta a na-akọwaghị.
N'ihi ya, ọ malitere ọrụ ọkachamara ya na ụlọ ọrụ ọhụrụ ya. Onye ọkpụkpọ na-abịanụ etinyeghị oge dị ukwuu na Maldonado ka ha binyere ya ego na ụlọ ọrụ Brazil, Vasco da Gama.
Vingkwaga Vasco da Gama yiri ka ọ mepụtara ohere ka mma maka ọrụ ọkachamara Allan. N'ezie, o nwetakwara oge igwuri egwu n'òtù ndị ntorobịa ha.
N'ụzọ dị mma, a kwalitere Allan na Vasco da Gama nke mbụ mgbe ọ rụchara ọtụtụ ihe dị ukwuu na klọb nke klọb.
Hụ ya ka ọ na-agbasi mbọ ike iji nweta bọọlụ mgbe ọ na-egwu Vasco da Gama.
Allan Loureiro Bio - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
… Mgbe o nyeere Vasco da Gama aka inweta Serie B, ọ dị nwute na Allan nwere nnukwu mmerụ ahụ.
Naanị mgbe ọ na-enweta ọkwá ka ike gwụrụ bọọlụ - Mgbu - jidere ya. N'ụzọ dị mwute, ọ gaghị enwe ike ịme egwuregwu dị mma maka klọb ya n'ihi mmerụ ahụ.
Dika ndi obodo ya (Neymar na Felipe Anderson) Ndị nọbu na akpụkpọ ụkwụ ya na mbụ, Allan gbalịsiri ike ịgbake site na mmerụ ahụ ya. N'ihi ya, ya na ndị otu egwuregwu klọb zụrụ ya mgbe niile iji nwetaghachi ike mgbe ọ gbachara.
Akụkọ Allan - Akụkọ Successga nke Ọma:
N'ụzọ na-akpali mmasị, ọzụzụ Allan lara n'iyi. N'ezie, o mere ihe ngosi dị ịrịba ama mgbe ọ laghachiri na nke mbụ nke Vasco da Gama.
N'ihi nkà ya na-enweghị atụ, Allan nwere ike izipu bọọlụ na-agagharị na ụgbụ. N'ihi ya, o nyeere ndị otu ya aka merie asọmpi 2011 Serie A.
N'ụzọ dị mma, Allan na-aga izute onye ọkpụkpọ nwere nkà dịka Bruno Fernandes ka ọ na-emechi nkwekọrịta ọhụụ na ụlọ ndị Italia, Udinese na June 2012.
N'ụlọ ọgbakọ ahụ, ọ ghọrọ onye na-enweghị atụ na-atụle ya na-amasị ya Paul Pogba.
Afọ ole na ole ka e mesịrị, ọ bịanyere aka na deal 10 nde nyefe azụmahịa na Napoli ma gosipụta nnukwu arụmọrụ megide ndị egwuregwu akara ngosi dịka kwụụrụ, Dzeko, na Paul Dybala na Serie A.
Lelee anya ya na ịrị elu (site na Udinese ruo Napoli).
Ngwa ngwa rue oge edere akụkọ ndụ a, Allan abanyela na ụlọ ọrụ Bekee - Everton.
ekele Carlo Ancelotti, Onye hụrụ ụkpụrụ football ya n'anya, Allan ruru afọ atọ nke £ 21.7m na Everton.
N'oge na-adịghị anya, ọ ga-egosipụta nka klaasị ụwa mgbe ọ na-egwu egwu James Rodriguez, bụ onye debanyere aha na klọb ndị England na 2020.
Ọkwaga ya na Everton pụtara na ya na onye ọkpụkpọ egwu James ga - egwuri egwu James Rodriguez.
Ọnye na-bụ Allan Loureiro Girlfriend / Wife?
Dịka onye ọkpụkpọ guzosiri ike, ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụkarị banyere nwunye Allan Loureiro ma ọ bụ enyi nwanyị.
Iji gwa gị eziokwu, Allan nwere nwunye mara mma ma nwee ike ịkọwa dịka nwanyị nrọ nke onye ọ bụla.
Ọ bụrụ na ịmaghị, nwunye Allan (nke dị n'okpuru) bụ Thais Valentim. Dị nnọọ ka ndị mbụ ya na ya (Kalidou Koulibaly na Lorenzo Insigne), Allan na nwunye ya rụkọrọ ọrụ ọnụ iji lanarị ọgba aghara ahụ nke sitere na mutiny nke mbụ na Napoli na November 2019.
Zute ọmarịcha nwunye Allan Loureiro.
Dị ka ihe a na-enweta na opera ejije, Allan na-egosipụtakarị ezigbo nwunye ya na njikwa Instagram.
Ọzọkwa, alụmdi na nwunye ya na Thais emeela ka a mụọ ụmụ a na-akọwaghị.
Agbanyeghị, onye Brazil kesara otu foto nwa ya nwoke mgbe ọ mere emume ncheta ọmụmụ ya nke afọ asatọ na Naples, Italy.
Lee nkocha ụlọ Allan lụrụ.
Ndụ Allan Loureiro Ezinụlọ:
Ọbụna mgbe ọ nwụsịrị, a hapụrụ ezinụlọ Allan n'azụ ọganiihu ya.
O nwere ike ịbụ na ọtụtụ mmadụ anaghị egosi na ha anaghị eche gbasara ya ka ọ bụ na ọ bụ n’ihi na ọtụtụ ndị na-eleda ya anya. Chọpụta ihe banyere onye ọ bụla nọ n’ezina Allan Loureiro, bido na ndị mụrụ ya.
Banyere nne na nna Allan Loureiro:
Ikwere na ma ọ bụ na ọkwaghị, nne na nna Allan emetụtala echiche omume ya. N'ụzọ na-akpali mmasị, nne ya, Rosana na-aja ya mma mgbe ọ bụla ọ na-aga n'egwuregwu ịgba bọl. N'aka nke ọzọ, amachaghị banyere nna Allan.
Ekpere ya na ihu ọma ya na ndị Brazil nọ mgbe niile. Lee n'okpuru, otu Rosana na nwa ya nwoke si eme emume mgbe ya na ndị otu ya meriri asọmpi Copa America.
Zute Allan Loureiro anwụrụ ike, Rosana.
Banyere ụmụnne Allan Loureiro na ndị ikwu:
N'ihi ọdịdị nzuzo ya, Allan Loureiro anaghị ekwu okwu banyere ụmụnne ya ndị nwoke na ndị nwanyị na mgbasa ozi.
Eziokwu bụ, onye Brazil na-a paysa ntị naanị n'ihe metụtara bọọlụ mgbe ọ bụla ọ na-ekwu okwu na nnọkọ ogbako. Ka a sịkwa ihe mere na enweghi ozi na-egosi njirimara nke ndị nne na nna ya ochie.
Mgbe ọ kwagara Everton, ndị agbụrụ Allan nwere olileanya na ọ ga-atọpụ ntakịrị ma kpughee ụfọdụ nkọwa na-adọrọ mmasị banyere nne nne ya na nne nne ya.
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ Brazil ahụ wee nwetakwuo otuto, anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ ndị na-eto onwe ha dị ka nwanne nna ya, nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya, ma ọ bụ ụmụ nwanne ya. Ọ bụ sọọsọ ọdịnihu ga-aza anyị ajụjụ.
Ndụ nke Onwe Allan Loureiro:
Maka ndị gị na-eche na Allan na-eche naanị maka bọọlụ, ị nwetala echiche gị niile.
E wezụga ọrụ ịgba bọl, onye Brazil na-etinye oge ka ukwuu na nwunye ya mara mma. Mgbe ọ nọ ya, ọ na-ewekarị ụfọdụ ọnyà iji cheta oge magburu onwe ya ejiri ịhụnanya maka ndụ ya.
Ọ na-enwe obi ụtọ iso ndị nwunye ya na-anọkọ.
Ihe ọchị zuru oke, njirimara Allan Loureiro na-emegide àgwà zodiac ya - Capricorn. N'ịbụ onye biworo ndụ nzuzo, onye Brazil na-eto eto ruru ala ma nwee obiọma.
N'otu oge, mgbe ndị agbụrụ ya ji ya tụnyere Arturo Vidal, enye ama okop idatesịt onyụn̄ ọdọhọ ete;
“Ogwu? Ọ bụ eziokwu na anyị yitụrụ, anyị nwere ụdị ọkpụkpọ egwuregwu yiri nke a, aghaghị m ịga n'ihu na-arụsi ọrụ ike, enwere m obi ụtọ na ndị mmadụ nwere obi ụtọ n'egwuregwu m. ”
Ndụ Allan Loureiro:
Ego ị na-enweta kwa afọ nke onye na-eto eto na-adịchaghị ewu ewu mana nke na-eto eto ga-eju gị anya. Lan maara?… Allan na-anata ụgwọ ọnwa kwa afọ ihe ruru € 4 nde na Napoli.
N'agbanyeghị nke ahụ, nkwekọrịta mbufe ya nke .28.00 2020m na ​​Everton emeela ka Net Netth ya dị na XNUMX. Tebụl dị n'okpuru ebe a na-enye gị nkwụsị zuru oke nke ụgwọ Allan n'oge a na-ede Biography.
Allan Everton rygwọ ọnwa ụgwọ:
Kwa Afọ £ 5,063,452 € 5,468,400 $ 6,478,687
kwa ọnwa £ 421,954 € 455,700 $ 539,890
Kwa Izu £ 97,224 € 105,000 $ 124,399
Kwa ụbọchị £ 13,889 € 15,000 $ 17,771
Kwa elekere £ 579 € 625 $ 740
Kwa Nkeji £ 9.7 € 10.4 $ 12.3
Sekọnd £ 0.16 € 0.17 $ 0.21
Allan Loureiro useslọ na Cgbọ ala:
N'adịghị ka foto nke echiche gị banyere ndụ Allan, onye Brazil enweghị mmasị igosipụta okomoko. N'ezie, anyị enweghị ike ịgbagha eziokwu kachasị na Allan nwere ụlọ dị oke ọnụ yana ikekwe ọtụtụ ụgbọ ala ndị mara mma.
Otú ọ dị, ịdị umeala n'obi ya na àgwà echekwara egbochila ya igosipụta akụ ya na ịntanetị.
Nke zuru oke, onye ọkpụkpọ Everton ahụla ka ọ na-anya ụgbọ ala. Lee foto dị n’okpuru ma gbalịa ịkọwa ụdị ụgbọ ala ọ na-agba.
Kedu ihe bụ echiche gị kachasị mma maka ụdị ụgbọ ala a?
Eziokwu Allan Loureiro:
Nke ozo iji nye gi ngwugwu zuru oke nke Allan Loureiro's Life Story, bu ihe ole na ole ga - enyere gi aka inweta ihe omuma banyere ihe omuma ya.
Eziokwu nke 1: Ego iri na otu nke 16 ya
Anyị ejirila nlezianya tinye nyocha nke ụgwọ Allan ka elekere na-akụ. Chọpụta n'onwe gị ego onye Brazil nwetara (Everton Salary Stats) kemgbe ị bịara ebe a.
Nke a bụ ihe Allan Loureiro akwụla ụgwọ na Everton kemgbe ị malitere ilele Page a.
Eziokwu nke 2: Attdị Allan Loureiro:
You maara? Midfielder Onye na-eto eto Everton nwere mmasị ịka ahụ ya. Dị nnọọ ka Zlatan Ibrahimovic, Allan etinyela ọtụtụ egbugbu n'ahụ ya. N'okpuru ebe a bụ foto na-egosi ụfọdụ egbugbu Allan Loureiro.
Ahụ ya jupụtara na akara.
Eziokwu nke 3: Allan Loureiro Egwuregwu Egwuregwu:
Dị ka onye na-egwu egwu pụrụ iche, Allan egosiputala ọtụtụ ọrụ ịtụnanya, egwu ị ga-ahụ. Na pitch, ọ na-arụkarị dị ka onye etiti ma ọ bụ na-agbachitere midfielder.
N'ọtụtụ ọnọdụ, ọsọ nke egwuregwu ahụ nwere ike ịkwado ya ka ọ gbanwee site na midfield.
E nwere ọtụtụ ihe n'egwuregwu ya karịa ihe anya na-ahụ. N'ezie, ọ dị ike ma dị gara gara. N'ihi ya, ọ na-eji ike ya eme ihe iji gbochie bọlbụ ngwa ngwa.
N'okpuru ebe a bụ ihe osise nke Allan na-emegide akara ngosi Neymar Jr. n'asọmpi dị n'etiti Napoli na PSG
O siri ike ijide Neymar.
Eziokwu nke 4: Ọmarịcha Fifa Rating:
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-agba bọlbụ anaghị abụkarị otuto nke onye ọkpụkpọ Brazil, ọ bụ akara ngosi iji hụ na pitch.
Ọbụna Fifa akwadoro ike ịgba bọọlụ ya nyere ya ogo ya ogo 84. Lelee ezigbo ọkwa Fifa ya na foto dị n'okpuru.
Ọ nwere ọkwa zuru oke nke FIFA.
Aha n'uju: Allan Marques Loureiro
Aha Nick: Allan Loureiro
Ụbọchị ọmụmụ: 8th January 1991
Ebe amụrụ onye: Rio de Janeiro, Brazil
Nna: Maazị Loureiro
Nne: Rosana Nwachukwu
Nwunye: Thais Valentim
ụgwọ: € 5,468,400 (Kwa afọ)
Biography nke Allan Loureiro na-akụziri anyị na mkparịta ụka zuru oke na nraranye nye mbọ anyị ga-arụpụta ihe.
Agbanyeghi na otutu mmadu ekwughi okwu obere banyere Allan, o nyeere ndi otu ama ama aka inweta ezigbo agam n’ihu n’oge ya na ha no.
Ka a sịkwa ihe mere o ji nwee nsọpụrụ nke ịbụ a teknụzụ nwere onyinye onye chịburu isi Paul Pogba.
N'ikpeazụ, ndị otu Lifebogger niile nwere ekele maka oge gị iji gụọ Akụkọ Ndụ Allan Loureiro.
Jiri obi oma kerịta uche gị banyere ụdị egwuregwu bọọlụ Allan na igbe igbe dị n'okpuru. Ọzọkwa, kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọta ihe ọ bụla na-adịghị ka ọ dị mma na Bio.